Are the Rakhines demanding for the Ethnic Cleansing of Rohingyas? | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeAre the Rakhines demanding for the Ethnic Cleansing of Rohingyas?
Are the Rakhines demanding for the Ethnic Cleansing of Rohingyas?
August 10, 2017 drkokogyi
R they demanding for the Ethnic Cleansing of Rohingyas?
Rakhine Terrorist Dr Aye Mg’s daydream turned into nightmare when Min Aung Hlaing sent more troops there.
I am afraid of this call, “If the Myanmar Gov and Bama Buddhists fail to protect the Muslim Rohingyas from the Aye Mg led Rakhine TERRORISTS, it is the duty for ALL the Muslims around the world to INVADE AND PROTECT THE ROHINGYA MUSLIM BROTHERS.”
ANP ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အမြော်အမြင်ကြီး အမြင်ကျယ်စွာ တောင်းဆိုပုံနဲ့တော့ ရခိုင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းအူးတော့မှာဖဲ 😖
Chit Zaw သူတို့ရဲ့ဘံရည်မှန်းချက်ကဘာလဲ?သူတို့ရဲ့ဘံရည်မှန်းချက်ကအဲ့မှာရှိတဲ့ဘာသာခြားတွေပပျောက်ရေးလေ.ဆိုတော့အဲ့ဘာသာခြားတွေကိုနည်းမျိုးစုံနဲ့မနေနိုင်အောင်ဥပဒေကတမျိုး ဘုန်းရီးတွေကတမျိုး မျိုးချစ်ဆိုသူတွေကတမျိုးမိုင်းထိမှိုင်းမိတဲ့ပြည်သူတွေကတမျိုးသူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကိုဥာဏ်နီဥာဏ်နက်တွေအမျိုးအျိုးသုံပြီးအောက်တန်းစားပလံတွေနဲ့နည်းမျိုးစုံနှိပ်ကွတ်လာတာခုကုန်သလောက်ရှိနေပြီလေသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလဲ၇၅.ရနန်းလောက်ပြုတ်သလောက်ရှိနေပြီ၂၀၁၂ခုနှစ်အရင်ကသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်မြေလယ်ယာတွေခုထိသူတို့ကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်ချုပ်နှောင်ထားပြီးတကယ်လို့သူတို့ရဲ့နေရာတွေကိုပြန်ခွင့်ရရင်တောင်သူတို့နေရာတွေရှိသေးလား?သူတို့အကွက်တွေလယ်ယာတွေသူတို့ကိုပြန်ပေးမှာလား…?အန်ကယ်ကတော့နိုးပါဒီလိုဖျက်စီးမှုတွေအရင်ထဲကရှိနေတာလေ.ကဲခု၄၇..၈၂..ကြိုက်တာနဲ့စစ်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကဒီနေရာကဘာသာခြားပပြောက်ရေးပလံရှိနေတော့သိကြားမင်းလာဖြေရှင်းပေးရင်တောင်အဆင်မပြေနိုင်သလိုဘာသာခြားတွေကအကြမ်းဖက်တံဆိပ်နဲ့အဲ့နေရာကမကုန်မချင်းဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရဦးမှာဘဲ…ဒါနဲ့စကားမစပ်မျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကလဝကဝန်ကြီးတာဝန်ယူတဲ့လူကြီးသူ့ရဲ့စစ်ချက်အရဆိုရင်ခိုးဝင်ဆိုတာမရှိသလောက်ဘဲတဲ့ဗျ.ဒါပေမဲ့အားလုံးလက္ခံထားတဲ့အဖြေက……..ခိုးဝင်ဘဂ်ာလီ
← How to survive an earthquake when you’re travelling
ဗမာ နိင်​ငံ​ရေး ရဲ့ အာဏာလွန်​ဆွဲပွဲ ထုံးစံအတိုင်း ရိုဟင်​ဂျာ​တွေ ဟာ ၂၀၁၂ က စ ပြီး အခုချိန်​အထိ နှစ်​ဘက်​ ( သို့ ) သုံးဘက်​ ​လေးဘက်​ စလုံးရဲ့ အသုံးချ ခံ သက်​သက်​​တွေပါ လို့ ထင်​မိတယ်​ ၊ ဒီတ​ခေါက်​ ပိုနာဘို့ ဖြစ်​နိင်​တယ်​ →